ပွင့်လင်း လွတ်လပ်စွာ အခွန်ကောက်သည့်စနစ် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇော်အောင် (မုံရွာ)။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၄
နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အဘယ့်ကြောင့် လာရောက်ရင်းနှီးလိုပါသနည်း ..မေးခွန်းကို တည့်တည့်ဖြေရလျှင် …
၂။ ကျန်သည့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကောင်းခြင်း၊ အလုပ်သမားခဈေးချိုခြင်း၊စသည့်အချက်များမှာ လူကြားကောင်းရုံ ဖြစ်သည်။
အခွန်မည်ကဲ့သို့ ရှောင်နိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နာမလည်နိုင်ပါ။ နိုင်ငံတကာတွင် ၄၅% အထိ အခွန်ကောက်ပါသည်။ မပေးလျှင် အလွန်ပြင်းထန်သော ဥပဒေများရှိသည်။ လူမပြောနှင့်၊ ဧရာမကုမ္ပဏီကြီးများကိုပင် အစိုးရက တရားရုံးကြီးများတွင် တရားစွဲသောကြောင့် ဒေဝါလီ၊ လူမွဲဖြစ်သွားလေ့ရှိသဖြင့်၊ အခွန်မရှောင်ရဲကြပါ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်ကဲ့သို့ ဥပဒေအားနဲသော နိုင်ငံတွင် အခွန်ရှောင်၊ စီးပွားလာလုပ်ကြသည်။ တရုပ်၊ အိန္နိယ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် အခွန်လျှော့ပေးသော SEZ Special Economic Zone များဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှု စတင်ကြသည်။ မြန်မာပြည်တွင် SEZ မရှိသေး။ မြန်မာပြည်တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများကို အခွန်ကောက်ဖို့ မလုပ်ပဲ၊ တစ်လ တစ်သိန်း၂သောင်း လစာရှိသူကို အခွန်ကောက်မည့် ဥပဒေပြဌာန်းနေပါသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးများကို အခွန်ကောက်နိုင်မှ တရားမျှတသော စီပွားယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်။ ကုမ္ပဏီအလတ်၊ အသေးများနှင့် ပြည်သူလူထုကို အခွန်ကောက်ရန် စောလွန်းသေးသည်။ “ယခုအခါ အမြတ်အစွန်းကို အခွန်မကောက်သည့်အပြင်၊ အခွန်လွတ် ၃နှစ်၊ နှစ်များစွာ ပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ ငွေစာရင်းကို စစ်နိုင်လောက်သည့် အားကောင်းသည့် စာရင်းစစ်အဖွဲ့ မရှိခြင်း၊ စာရင်းစစ်များမှာ ငွေရှင်များ၏၊ ခါးပိုက်ထဲရောက်နေခြင်း..” စသည့်အားနည်းချက်များစွာ ရှိနေသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အခွန်ကောက်နည်းစနစ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကူညီမည်ကို မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးထိပ်တန်း၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်သူများက စိုးရိမ်ကြပါသည်။ Eleven Media မှ စကိုင်းနက်တီဗွီလုပ်ငန်းကို အစိုးရ ၄%၊ ကုမ္ပဏီ ၉၆%၊ ၃နှစ်အခွန်မပေးပဲ၊ ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန် ခွင့်ပြုခြင်းကဲ့သို့ စာချုပ်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် အမေရိကန် အခွန်စနစ်ကို အလွန်ကြောက်ရွံ့မည်ဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ပါစေ.. ၃နှစ် စားသောက်၊ အမြတ်များစွာ ယူပြီးပါက တရားမျှတသော စာချုပ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲ၊ အခွန်ကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာတွင် စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် အလွန်အစွမ်းထက်သည်။ စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့်အခွန်ဝန်ထမ်းများမှာ အရေးကြီးဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရောက်နေပြီးသော ကုန်များကို လိုက်ဖမ်းဆီးသော မြန်မာပြည်မိုဘိုင်းအဖွဲ့ကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ၊ နယ်စပ်တွင် ပိုင်နိုင်စွာအခွန်ကောက်နိုင်မှ ဖြစ်မည်။ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းပေါင်းများစွာတို့တွင် အခွန်ကောက်ခြင်းကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ သင့်နေပြီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် Tax per GDP 20% to 45% ရှိနေချိန်တွင် ၂၀၁၃ ဘတ်ဂျတ်ကြေငြာချက်အရာ မြန်မာအခွန်ကောက်မှု Tax per GDP မှာ ၃နှစ်ကြာလဲ၊ ဘာမှမထူးခြား၊ ၂.၅% မျှသာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ်က အခြေခံအဆောက်ဦးလဲပြိုမှာကြောက်သဖြင့် ဖြေးဖြေးချင်း၊ နှေးကွေးစွာ အခွန်ကောက်နေပုံရသည်။
ဘယ်လုပ်ငန်းများသည် အခွန်လွတ်နီးပါး၊ အလွန်ဆိုးဝါးနေသနည်း ကို သာမန်လူပင်သိနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သော ဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်း၊ လောင်စာဆီ၊ သယံဇာတ၊ အရက်ဆေးလိပ်၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ ဇိမ်ခံကားများ ..စသည်တို့ကို အခွန်မှန်ကန်စွာ ကောက်နိုင်ဖို့လိုသည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းများတွင် အိမ်ခြံမြေ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများသည် အခွန်ရှောင်ရာတွင် အံ့သြဘွယ်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ ဝင်ရောက်မကူညီခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အစိုးရဝန်ထမ်းများက မတန်တဆ ဈေးနှုန်းများကို တားဖြစ်ဖို့လိုသည်။ Valuation လုပ်မှုတွင် ခြစားမှုအလွန်ကြီးမားလှသည်။
မည်သို့လုပ်ရမည်ကို အစိုးရလူကြီးများ သိပါသည်။ အမေရိကန်အခွန်စနစ် (သို့မဟုတ်) ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်အခွန်ကောက်စနစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးလာမည့်အချိန်ကို စောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
● ဂျာမန်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံလာရောက် အားပေးခြင်း (12-Feb-2014, RFA News)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမမှာ ဂျာမနီနုိုင်ငံသမ္မတ မစ္မတာ ဂျိုဝါချင် ဂေါက်ခ် Mr. Joachim Gauck မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် လူငယ်များ မိမိတို့တစ်ဦးချင်းစီ ပိုင်ဆုိုင်တဲ့အင်အားကိုယုံကြည်ကြရန်၊ အာဏာ၊ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ အခွင့်ထူးခံစားခွင့်များကို လက်မလွှတ်ချင်သူများ၏ အပြောင်းအလဲကို တားဆီးမှုအသံများ နားမယောင်ကြရန်၊ မိမိတို့ တစ်ဦးချင်းရရှိထားတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကို အသုံးချပြီး အမှောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့သူတွေကိုတွဲခေါ်ကြဖို့ မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်များကို တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ပြောကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့် ဥပဒေပြုရေးအာဏာကို လူနည်းစုလက်ထဲတွင် ဆုပ်ကိုင်ထားပါက စီးပွားရေးအရ တိုးတက်လာရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီနေ့ရရှိထားသော အပြောင်းအလဲများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာနုိုင်ငံသားများ၏ အကြောက်တရားကင်းကင်းစွာ ကြိုးပမ်းမှုမှ၊ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းမှုကို ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္တသိုလ်သည် လွတ်လပ်ခြင်းအတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် တုိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော သမုိုင်းဝင်ကျောင်းဖြစ်သည်။ ဒီကျောင်းတွင် အခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ အဲဒီ အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့သတ္တိကို မမေ့သင့်ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဂျာမနီသမ္မတဟာ နုိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့် သီးသန့်စီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဂျာမနီနိုိုင်ငံဟာ ဂျပန်နိုင်ငံပြီးရင် မြန်မာနုိုင်ငံကို ဒုတိယမြောက်အကူအညီအများဆုံးပေးသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုိုင်ငံကပေးဖို့ကျန်နေသည့် အကြွေးယူရိုငွေ သန်း ၅၀၀ ဖြေလျှော့ပေးဖို့ကိုလည်း နုိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာ သဘောတူခဲ့သည်။ မြန်မာ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မြန် လွန်းတယ်လို့ မဆိုနုိုင် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျာမနီနုိုင်ငံ သမ္မတ Joachim Gauck နေပြည်တော်၊ ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။ မြန်မာနိ်ုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အားရကျေနပ်စရာဖြစ်၍ ဂျာမနီနုိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံကပေးဖို့ရှိတဲ့ အကြွေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၆၈၂ သန်းကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကောင်းမြင်သင့်သည့် အကြောင်းပြချက်များလည်းရှိကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများ အဆုံးသတ်ရန် ကြိုးပမ်းချိန်မှစ၍ နိုင်ငံအနှံ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ရန် အစပျိုးလာခဲ့ကြောင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမည်ဖြစ်ကြောင်း Eleven Media တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
ဂျာမဏီသမ္မတ (၇၄နှစ်) သည် ကွန်မြူနစ်အရှေ့ဂျာမဏီမှ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ၊ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ Lutheran pastor ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျာမဏီ၂နိုင်ငံပေါင်းစည်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လှုပ်ရှားမှုများစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၂တွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်ခံရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI မြန်မာနုိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်မှာ မြန်မာနုိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်သလို နေ့လည်ပိုင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျာမနီနုိုင်ငံသည် ဂျပန်နုိုင်ငံပြီးရင် မြန်မာနုိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပေးမှု အများဆုံးနုိုင်ငံဖြစ်သည်။
● မြန်မာပြည်အခွန်ကောက်မှု အခက်အခဲများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးမရနိုင်သော ရာထူးကြီး၊ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များစွာ ရှိနေသည်။ တရားရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများတွင် အောက်ခြေမှ၊ ထိပ်ဆုံးအထိ စာရိတ္တပြစ်မှုများစွာ ရှိနေသည်။ ထိုသူများကို အရေးယူဖို့ မပြောနှင့်၊ အနားပေးဖို့ပင် အင်မတန်ခက်ခဲနေပါသည်။ မကြာမီ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာကြွယ်ဝသူများနှင့်၊ ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို စာရင်းကောက်နိုင်သော ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ရှောင်ပြေးလို့မရတော့ပဲ အခွန်ပေးရချိန် နီးလာပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်မှာ သူဌေးကြီးများ အခွန်ရှောင်းနိုင်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ ပြည်သူများဝင်ငွေကို လုယူမည့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ၊ လောင်စာဆီဈေး၊ ဌာနဆိုင်ရလိုင်စင်၊ပါမစ်ကြေးများစွာ တို့ဖြစ်သည်။ စားသောက်ကုန်၊ အဝတ်ထည်၊ လူသုံးကုန်၊ ဆေးဝါးပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ၊ တင့်သင့်မှုသည် နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်များကို မှန်ကန်စွာအခွန်ကောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဥပမာ.. တရုပ်၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွင် လယ်ယာသုံး၊ ကုန်ကြမ်း၊ စက်ကရိယာများကို အစိုးရက ၄၀% အထိ ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အလျှင်အမြန်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ လယ်ယာစီးပွားတွင် အခွန်လုံးဝမကောက်ပဲ၊ ပံ့ပိုးမှုပေးရမည်။ လောင်စာ၊ဆက်သွယ်ရေး၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို အခွန်မှန်ကန်စွာ ကောက်နိုင်ရမည်။
ခရိုနီများ တင်သွင်းလာသော ကွန်တိန်နာများ၊ ကုန်ကားကြီးများကို X-ray ဖြင့် ရိုက်ပြီး၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါမလာရေး၊ အရက်၊ဆေးလိပ်၊ ဆေးဝါးများ Drug ကန့်သတ်ကုန်များးကို တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေး၊ အခွန်ကောက်ရပါမည်။ X-ray တန်ဖိုးမကြီးသော်လည်း မတပ်ဆင်သေးပါ။ တားမြစ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာပါက သိမ်းဆည်းပြီး၊ ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၂ဆ၊ စသဖြင့် ဒဏ်တပ်ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စားသောက်ကုန်ချောများ တင်သွင်းခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ အခွန်မကောက်လျှင် ပြည်တွင်းထတု ကုန်ချောများကို ကာကွယ်ပေးရပါမည်။ အလားတူ ဆေးဝါးများကိုလည်း ပြည်တွင်းထုတ် ဆေးဝါးများကို ဦးစားပေးရမည်။ စားသောက်ကုန်၊ ဆေးဝါးများ၊ လူသုံးကုန်၊အဝတ်အစားများတွင် ပြည်တွင်းထုတ်များကို ဦးစားပေးရန်၊ ပြည်ပတင်သွင်းမှုများကို အခွန်မှန်ကန်စွာ ကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကန့်သတ် သွင်း/ထုတ် ကုန်များလည်း ရှိသေးသည်။
အခွန်စနစ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဒီလိုကောက်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဒါမျိုးဖြစ်နေပါသည်..ဟု သုတေသနလုပ်လဲ မလုပ်လိုတော့ပါ။ အထက်ပါ အခွန်ကောက် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းနည်း အစိုးရက သိပါသည်။ တကယ်တန်း အကောင်းထည်ဖေါ်ရန် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပြဿနာကြီးမှာ အမြစ်တွယ်လျှက်ရှိသည်။ “ဂျာမဏီသမ္မတကြီး မြန်မာနိုင်ငံအထိ လာရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောသည့်အတိုင်း အာဏာ၊ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ အခွင့်ထူးခံစားခွင့်များကို လက်မလွှတ်ချင်သူများ ပြသနာဖြစ်သည်။ “ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရ၊ တရားရေးနှင့်ရဲဝန်ထမ်းများ မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်ရန်၊ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရမည်ဟု ဆိုသည်။ ပြည်တဲရေးဝန်ကြီးနှင့်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနသည် အခြေခံဥပဒေအရ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားပြီး၊ စစ်တပ်မှအရာရှိများ၊ အရာရှိဟောင်းများက ကိုင်တွယ်ထားဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဒေသလွှတ်တော်များ အာဏာခွဲဝေမှု ဥပဒေအခက်ခဲ ရှိနေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားမှာ လာမည့်ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများသည် အခွန်၄၅% မပေးရသည့်အပြင်၊ အမြတ်ငွေများကို ထုတ်ယူသွားခွင့် လွန်ကဲစွာရရှိထားသောကြောင့်၊ အခွန်ဥပဒေကို မြန်မာအစိုးရနှင့်လျှို့ဝှက်စွာ ချုပ်ဆိုထားသော တရုပ်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီကြီးများစွာ၊ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်စားနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ အချို့လုပ်ငန်းများမှာ အနှစ်၆၀၊ အနှစ်၉၀ စသဖြင့် အံ့သြစရာ စာချုပ်များကို ချုပ်ဆိုကြခြင်းကို ပွင့်လင်းစွာ ဖေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။
သို့မှသာ ပွင့်လင်းစွာအခွန်ကောက်သည့် စနစ်တစ်ခု အမြန်ဆုံးပေါ်လာပြီး၊ ဂျပန်၊ ဂျာမဏီ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုစာချုပ်များစွာ ရောက်ရှိလာမှ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရေး မြန်လာပါမည်။
ဂျပန်နှင့်ဂျာမဏီ ၂နိုင်ငံတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကြွေးလျှော်ပေးမှု၊ မှန်ကန်သောရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။
2 Responses to ပွင့်လင်း လွတ်လပ်စွာ အခွန်ကောက်သည့်စနစ် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည်
catwoman on February 14, 2014 at 1:18 am
yes many things need change and it ll take yrs. there should be changes in healthcare and education as well.
SuriyaNAyWun on February 16, 2014 at 9:47 pm
Yes, agreed and all of the problems point to one major issue to be tackled; Change the “undemocratic constitution of 2008” that will remove “Kar-Lon-National Security & Defence committee” and “U-Paing- Myanmar Economic Holding”